कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्रा प्रतिभाको अकालमै मृत्यु ! – News543Online
कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्रा प्रतिभाको अकालमै मृत्यु !
April 25, 2021 adminLeaveaComment on कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्रा प्रतिभाको अकालमै मृत्यु !
रुपन्देहीको प्यारामाउन्ट बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्राको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । विद्यालयको छात्रावासमा बस्दै आएकी १५ वर्षीया प्रतिभा सापकोटाको मृत्यु भएको हो ।
ज्वरो र पेट दुख्ने स’मस्या भएपछि उपचारका लागि शनिबार परिवारका सदस्यले म’णिग्रामको क्रिमसन अस्पतालमा उपचारका लागि लगेका थिए । तर अस्पताल पु¥याए लगत्तै उनको मृ’त्यु भयो ।छात्राको मृत्युपछि विद्यालयले होस्टेलमा रहेका विद्यार्थीहरुको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वा’ब संकलन गराएको छ ।
छात्रावासमा प्रतिभासँगै ५० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी थिए ।मृतकका दाजु प्रकाश सापकोटाले बहिनीलाई दुईदिनदेखि ज्वरो आएपनि समयमै उपचार न’गराउँदा मृ’त्यु भएको दा’बी गरे । हामीलाई कोभिड–१९ संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको शंका छ प्रकाशले भने ।प्रतिभाको मृत्युपछि केही विद्यार्थी र अभिभावकले विद्यालय घेराउ गर्दै नाराबाजीसमेत गरेका थिए ।
त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट संविधान सभा सदस्य मोहम्मदी सिद्दिकीको नि’धन भएको छ। सिद्दिकीको शनिबार भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा नि’धन भएको अस्पतालले जनाएको छ। नेपालगञ्ज–३ निवासी ६५ वर्षीय सिद्दिकीको बेलुकी साढे सात बजे उपचारका क्रममा नि’धन भएको अस्पतालका प्रमुख डा. प्रकाश थापाले जानकारी दिए।
थापाका अनुसार सिद्दिकीलाई चैत २८ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएदेखिनै अस्पतालले भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिरहेको थियो। उनलाई मधुमेहको स’मस्या रहेको डा. थापाले बताए। २०३६ सालदेखि प्रजातान्त्रिक आ’न्दोलनमा सक्रिय रहँदै आएकी सिद्दिकी संविधान सभामा स’मानुपातिकतर्फ नेपाली कांग्रेसबाट सभाषद् बनेकी थिइन्।
मोटरसाइकल दुर्घटनामा २७ बर्षिया महिलाको मृत्यु
अमेरिकाबाट कहिल्यै घर नफर्किने गरी अस्ताइन् नेपाली चेली रोजी ! मनमा अलिकति दया भए [R.I.P] लेख्नुहोस